Baaritaanno ka socda Laamu ka dib Askar lagu laayay Halkaas – Radio Daljir
Luulyo 14, 2015 4:05 b 0
Talaado, Luuliyo 15, 2015 (Daljir) —Ugu yaraan shan qof oo ay ku jiraan ciidammo booliis ah ayaa ku geeriyooday kaddib markii Qarax miino lagula beegsaday duleedka deegaanka Lamu ee dalka Kenya, iyadoo miinsadu ay haleeshay gaari ay la socdeen dadkan.
Taliyaha booliiska Gaarsia ayaa Xaqiijiyay dhacdadan, isagoo inay ku dhinteen saddex qof oo shacab ah iyo laba sarkaal oo booliis ah, wuxuuna sheegay in Saraakiisha Booliiska ahi ay kusii socdeen deegaan lagu magacaabo Hindi si ay uga soo Adeegtaan, balse ay si lama filaan ah uga kacday gaarigoodii miino waddada dhinaceeda lagu Aasay.
Wararka laga helayo deegaanka uu shilkan ka dhacay ayaa sheegaya in miinadu ay si weyn u Waxyeeleysay gaarsiisay Baabuurka. Iyadoo Saraakiil ka tirsan Booliiska Kenya ay sheegeen in Weerarka ay uga shakisan inay geysatay Kooxda Al-shabaab ee Soomaaliya.
Sidoo kale, Maxamed Saalax oo ka tirsan mas’uuliyiinta Gobolka Waqooyi-bari ee Kenya ayaa sheegay in gaariga ay wateen ciidammo ka tirsan booliiska Kenya oo u socday deegaanka Hindi, isagoo xusay inay laba sarkaal ku dhinteen.
Inkastoo aysan jirin cid sheegatay Mas’uuliyadda Weerarkan ayaa Haddana la xusuustaa in Al-shabaab ay horay uga geysatay gudaha Kenya weerarro is-xig-xigay oo la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 500-qof dhowrkii sano ee lasoo dhaafay.
Ugu dambeyn, Deegaanka Lamu ee Xeebta dalka Kenya kuna dhow xadka ay Wadaagaan Somalia iyo Kenya ayay Al-shabaab dhowr jeer isku xigta weerarro ka geysatay, kuwaasoo ay ku dishay dad badan oo Kenyaan ah.
Si kastaba ha ahaatee, Bishii hore ayay ahayd markii 11-ka mid ah Dagaal-yahannada Al-shabaab lagu dilay duleedka deegaanka Lamu kaddib markii ay weerar ku qaadeen saldhig ay leeyihiin millateriga Kenya, waxaana ku jiray dadka la dilay qof u dhashay dalka Britain oo u dagaalamayay Al-shabaab.